Jwxo-shiil oo Dhaawac Culus ah oo Dubai Dad Dhulbahante ahi Keeneen! – Rasaasa News
Jun 16, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
“Boholo Khayaano ha qodin hadaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaana moojiye”, Walee ama dhimay ama dhiman doone dhurwaagii suudha lahaa, warar aad loogu kalsoonaan karo oo ka soo baxaya qaraabada qoyska Jwxo-shiil, ayaa waxay xaqiijinayaan in Jwxo-shiil oo dhaawac Culus ah la keenay Dalka isu taga Imaraadka Carabta [UAE].
Waxaa la sheegayaa in xalay fiidkii la keenay magaaladii uu kula qaatay kulanka beeshiisa ee uu ka duulay kolkii ugu dambaysay, isaga oo qaar ka mid ah beeshiisu ay yidhaahdeen waxa aad wado nooma cuntamo, balse kolkii dambe ay ku heshiiyeen in ay siinayaan taageero buuxda wax kasta oo uu sameeyana ay ku taageerayaan.
Maalintaa dadkii go,aankiisa goob jooga ka ahaa waxaa ka mid ahaa Ina Aadan Dhagoole [Dolal], Ina Af Waranle iyo ninka isagu khasnajiga u ahaa lixdii sano ee ugu dambaysayba Jwxo-shiil waa;;;.
Hadaba sida ay waraku sheegayaan waxaa, uu dagaal ka dhacay meel qarka u saaran xadka beesha dhulbahante iyo dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaana uu dagaalku dhexmaray ciidanka la socday jwxo-shiil oo qaar ka mid ahi ay u cuntami wayday qorshe uu u soo bandhigay oo ahaa, kol hadii aan dilay Dr. Dolal xilka waxaan ku wareejinayaa sidii aan ku balan sanayn Ina Ismaaciil [Qaaxo].
Isaguna waxaa uu doonayey in uu dalka sidaasi kaga soo baxo isga oo soo kaxaysanay dhawr wiil oo isga si gaar ah oo beelnimo ah ula socday, waxayna u sheegeen ragii la socday suurto gal ma ahee waa in aad nal joogtaa waad og tahay waxa aan gaysanay adiga ayaana Aabe noogu ahaaye, halkaasna waxaa ka bilowday is maan dhaaf dhibaato keenya.
Sida ay warku sheegayaan raga la socday waxaa ka mid ahaa Cabdi Cabadulahi oo ay walaashii dhashay, Daa,uus oo ahaaa ragii Dr. Dolal wax ka dilay iyo nin la yidhaahdo sheekh Deeq oo isaga ay Dr. Dolal isku hayb ahaayeen, aadna uga calool xumaa nidaamkii Dr. Dolal loo dilay laakiin ayna waxab faraha ugu jirin.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa dagaalka ku dhintay 12 nin oo Madax ah waana cara dhul bahante meesha uu dagaalku ka dhacay, sida ay wararku sheegayaan waxaa la soo magac dhabay Sheekh Deeq, Cabdi Cabdulahi iyo 10 nin oo kale.
Markaasi ka dib ayaa waxaa goobtaas soo gaadhay niman dhulbahante ah, kolkii ay aqoonsadeena, waxaa ay ula soo carareen xaga Puntland, halkaasi oo Dubai loogu qaaday dhaawiciisa.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa isagu il geeriyaad leh Jwxo-shiil Ilahay oo u booga dhaya mooyee. Maalmahan fooda inagu soo hayaa ayaa la sugayaa in Afadiisa iyo hal wiil oo uu dhalay u duulaan dalka UAE.
Wixii ka soo kordha warkaasi waxaad kala socon doontaan rasaas.com